क्रसफिटिङको प्रविधिलाई स्वामी बनाएर, तपाईं न केवल आन्तरिक चीजहरू वा लुगाहरू मात्र बनाउन सक्नुहुन्छ, तर झुट्टा, मोती र कंगन जस्तै गहना पनि। साथै, एक मनका क्रसफाई कसरी बाँध्न जान्दछ, यो वर्ष एक वर्ष सम्म बच्चाहरु को लागी सहायक बनाउन सजिलो छ। आधुनिक आमाहरूले साँच्चै बच्चाहरूको ध्यान आकर्षित गर्नका लागि ढोकाहरूको कदर गर्छ (जसले उनीहरूको आमाको कपाल वा बालुवाको हेरविचार गर्न मन नपर्ने), र फिंग औंला गतिशीलताको विकासमा पनि योगदान दिन्छ।
बेइजिङ मोतीको लागि छनौट गर्न कुन यार्न?
समाप्त उत्पादन साफ गर्न, बुना भयो कपडा धेरै तंग हुनुपर्छ। एक पतली थ्रेडसँग बाँधिएको मोतीहरू राम्रो देख्छन्, त्यसपछि स्तम्भहरू बिल्कुल समान, पनि भित्री र सानो देखिन्छ। ठूला र मोटे तत्वहरू केवल गहनाको रूपमा भोग्छन् र यसलाई ढोका बनाउँदछ।
तपाईंले मोतीलाई बाँध्नु अघि, तपाईंले भविष्यको उत्पादनको डिजाइनमा ध्यान दिनुपर्दछ: रङ दायरा, व्यक्तिगत तत्वहरूको स्थान, तिनीहरूको साइज र आकार।
निर्णय अनुसार तपाईलाई आवश्यक रंग र संरचनाको सामग्री खरीद गर्न आवश्यक छ। एक मनका कर्सेट कसरी बाँधेर एल्गोरिथ्मलाई थाहा छ, तपाइँ कपास वा भिसाको थ्रेड लागू गर्न सक्नुहुनेछ। उपयुक्त पनि पतली scrubbing, angora र mohair छ। तिनीहरूको मोटाई कम से कम 400 ग्राम प्रति 100 ग्राम हुनुपर्छ, र अधिमानतः 500-600 मीटर प्रति 100 ग्राम हुनुपर्छ। धेरै शिल्पकारहरूले सोचेका छन् कि यस्तो थोरै थ्रेडको साथ यो काम गर्न गाह्रो छ, तर मोतीका लागि यो सामग्री सही छ। र काम केही समय लाग्छ, त्यसैले यसले लामो समय लिनेछैन।
कसरी बाँच्नको लागि आधार रोज्नुहोस्
जब यो गहना सिर्जना गर्न आउँछ, सामानहरू वा गृह वस्तुहरूको लागि हैंडल गर्छ, तपाइँ सुरक्षित रूपमा कुनै पनि मोतीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, कसरी slingbottom को लागि एक मनका क्रोध क्रोध टाई गर्ने सिफारिसहरूमा बेस को रचना मा एक वर्ग समावेश गर्दछ। यो जूननिन, पाइन वा अन्य काठबाट मोती हुनु पर्छ। केवल काठ को मोती, जो चित्रित र पोर्टेबल छैन, बच्चाहरु को सामान बनाउन को लागि उपयुक्त हुनेछ। बच्चाहरू सबै केहि देख्न स्वाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छैनन् कि, त्यसैले तपाईंलाई उनीहरूको सुरक्षाको हेरचाह गर्न आवश्यक छ।
कसरी एक मनका crochet टाई गर्न: मास्टर वर्ग
यो ध्यान दिइन्छ कि मोती बेइजिङको लागि कुनै विश्वव्यापी विवरण छैन। पङ्क्ति र स्तम्भहरूको संख्या आधारको साइज र फिलेटको मोटाईमा निर्भर गर्दछ, तर त्यहाँ धेरै सामान्य ढाँचाहरू छन्:
अंगूठी संधै हावा लूप्स (VP) को शुरुवात हो, त्यसपछि केवल क्याप्स बिना स्तम्भहरू प्रयोग गरिन्छ (एसटीबी)।
त्यसपछि क्यानभासहरू विस्तार गर्दछ (स्तम्भ थप्दै)।
एक फ्लैट क्षेत्र आवश्यक छ।
कपडा कोण (स्टबएन को कमी)।
कसरी एक मनका कर्सहाट (beginners को लागि) बाँध्नुको विस्तृत विवरण हो। यहाँ, स्ट्रिङ "इरिस", 18 मिमी व्यास र एक हुक नम्बर 0.6 प्रयोग भएको थियो। त्यसपछि3VP को रिंग चलाउनुहोस्:
1 वीपी, 12 एसटीएनएन (दोश्रो पंक्ति को प्रत्येक STB डबल)।
1 वीपी, 1 एसटीएनएन,2एसटीएनएन (डबल प्रत्येक सेकेन्ड बीएसएन)।
1 वीपी, 1 एसटीएनएन, 1 एसटीएनएन,2एसटीएनएन (दोहोरो तेस्रो एसटीबी डबल)।
5-8 पङ्क्तिहरू ठीकसँग बोट गर्न।
श्रृंखलाको छैट भागमा 9ौं कट6एसटीएनएनमा।
10 औं सिधा सिधा यस चरणमा, तपाईंले बुना भयो आवरणमा मनमनै राख्नुपर्छ र त्यसपछि "कर्मोभोविट" क्यानवास भित्र राख्नुपर्छ।
11-12 पङ्क्तिहरू प्रदर्शन गर्दछ, साथै6StBN द्वारा कम।
अन्तमा, बाँकी छेद धागाको साथ कडा वा सुई संग सुकेको छ। पूंछ हुकहरू द्वारा क्यान्सरमा सारिएको छ र थप काटिएको छ। लम्बी सुईको मद्दतको साथ वांछित आदेश मा मोती मोती को धागा। साथै, हारमा प्रत्येक मोतीलाई लैजानुपर्छ दुवै कुनामा लुगहरूसँग अलग पिनको साथ।
यदि तपाईं बंधिएको मोतीहरूको लामो श्रृंखला बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ निम्न विधि लागू गर्न सक्नुहुन्छ:
आवरणलाई कुनै पनि उपयुक्त ढाँचामा राख्नुहोस् (अनुकूलः: 3-4 ईपीएसको जाल)।
थ्रेड वा माछा मार्ने रेखाको साथमा टाढा।
यो विधि एक थलोको लागि सिङ्ग र हैंडलहरू सिर्जना गर्न राम्रो छ।
गहनाको लागि के अरूलाई आवश्यक छ?
तैयार ब्यान्ड मोतीहरू केवल सजावट तत्वहरू हुन सक्छन्, उदाहरणका लागि, मोती बिना बलियो थ्रेडमा छिटो बज्नु पर्छ। यद्यपि, प्रायः अन्य घटक सँग संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ:
फिटिंग (शंघाई, धातु के छल्ले, ताले र फास्टनरहरू)।
प्लास्टिक, कांच र काठ मोती।
प्राकृतिक पत्थरों (पहने हुए मोती र चिप्स)।
गहना निर्माण गर्न, तपाईं सुई को बिना संकीर्ण संग गर्न सक्दैन, तर एक लामो आँखा, चिमनी, निप्पर्स र राउन्ड चिलीहरु।
जसको अर्थ कम अम्लता (पेट)? लक्षण
तैयारी, प्रक्रिया र सामाग्री को प्रकार: म वालपेपर primed पर्खालहरु गोंद छ गर्छन्
Daurian पोथे्र दम्सी: को रोचक तथ्य र तस्बिरहरू